M3 Dhalada Caaga Caaga - Mingsanfeng
Mingsanfeng Cap Mold Co., Ltd oo la aasaasay Juunyo 1999, shirkaddu waxay ku takhasustay horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegga cirbadaha caagga ah. Warshaddu waxay kaloo leedahay aqoon isweydaarsi caaryada ah, oo khibrad hodan ah u leh R & D iyo soo saarista caaryada daboolka caagga ah, waxayna u habeyn kartaa dhammaan noocyada dhalada dhalada. Shirkaddu waxay leedahay ku dhowaad 60 shaqaale, oo ay ku jiraan ilaa 10 injineero, 20 injineerro sare oo caaryada ah iyo 30 farsamo yaqaanno sare ah.
Waxa la aasaasay 1999.06
Waxaa jira in kabadan 60 shaqaale muhiim ah
In ka badan 20 injineero sare
oo leh qiime wax soo saar sanadle ah oo ah 35 milyan.
SII GUDBINTA CAP-F1416
SII GUDBINTA CAP-F2349
SOO KOOBTA TOP CAP-F2619
SII GUDBINTA CAP-F4044
16CAV M24 daboolka sare ...
1, Saldhig caaryuhu wuxuu ka samaysan yahay jir LKM ah, iyo HASCO s ...
Laba-midab M28 Flip top ...
16CAV D30mm budada fli ...
16CAV D48mm flip Tube ...